ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၈
ယေရှု၏ဘဝနှင့်ဓမ္မအမှုအကြောင်း စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မှတ်တမ်းကို ဦးဆုံးရေးသားသူမှာ မဿဲဖြစ်သည်။ သူသည် တစ်ချိန်က အခွန်ခံတစ်ဦးဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ယေရှု၏ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေဖြစ်လာ၏။ မူလက ဟေဗြဲဘာသာဖြင့်ရေးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဂရိဘာသာသို့ပြန်ဆိုသော မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် အေဒီ ၄၁ ခန့်တွင် ရေးသားပြီးစီးခဲ့သည်။ ယင်းသည် ဟေဗြဲကျမ်းနှင့် ခရစ်ယာန်ဂရိကျမ်းကို ဆက်စပ်ပေးသည်။
အဓိကအားဖြင့် ဂျူးပရိသတ်ကို ရည်စူး၍ရေးသားခြင်းဖြစ်ရာ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသော ဤခရစ်ဝင်ကျမ်းသည် ယေရှုကို ကတိထားရာမေရှိယ၊ ဘုရားသခင့်သားတော်အဖြစ် ကောင်းစွာဖော်ပြသည်။ ယင်းတွင်ပါသောသတင်းစကားကို အာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် စစ်မှန်သောဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော့်သားတော်နှင့် ကိုယ်တော့်ကတိတော်များအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို ခိုင်ခံ့စေပါလိမ့်မည်။—ဟေဗြဲ ၄:၁၂။
မဿဲသည် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့် ယေရှု၏သွန်သင်ချက်များအကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သော်လည်း အဖြစ်အပျက်များကို သက္ကရာဇ်စဉ်အတိုင်း အတိအကျဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပေ။ ဥပမာ၊ ယေရှုသည် တောင်ပေါ်တရားတော်ကို မိမိ၏ဓမ္မအမှုဆောင်ချိန်တစ်ဝက်ခန့်တွင် ဟောပြောခဲ့သော်လည်း မဿဲကျမ်းတွင် ယင်းကို အစပိုင်း၌ဖော်ပြထားသည်။
ယေရှုသည် ဂါလိလဲနယ်တွင်အမှုဆောင်စဉ် အံ့ဖွယ်အမှုများပြုခဲ့ပြီး တမန်တော် ၁၂ ပါးကို ခရစ်ယာန်ဓမ္မအမှုနှင့်ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များပေးခဲ့သည်။ ဖာရိရှဲများကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချပြီး ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ပတ်သက်သော ပုံဥပမာများကို မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဂါလိလဲနယ်မှထွက်ခွာပြီး “ယုဒပြည်စွန်း၊ ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်သို့ ကြွတော်မူ၏။” (မ. ၁၉:၁) လမ်းတစ်လျှောက်တွင် တပည့်များအား ‘ငါတို့သည် ယေရုရှလင်မြို့သို့ ယခုသွားကြ၏။ လူသားသည် သေပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်လိမ့်မည်’ ဟုမိန့်တော်မူ၏။—မ. ၂၀:၁၈၊ ၁၉။
၃:၁၆—ယေရှုနှစ်ခြင်းခံချိန်တွင် အဘယ်နည်းဖြင့် “ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်” ခဲ့သနည်း။ ယင်းက လူသားဘဝမတိုင်မီ ကောင်းကင်အသက်တာအကြောင်း ယေရှု ပြန်သတိရလာခြင်းကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
၅:၂၁၊ ၂၂—အမျက်ဒေါသကို ဖွင့်ချလိုက်ခြင်းသည် အမျက်သိုထားခြင်းထက် ပို၍အပြစ်ကြီးသလော။ မိမိညီအစ်ကို,ကို အမျက်မပြေဘဲ အမျက်သိုထားသူသည် ကြီးလေးသောအပြစ်ကျူးလွန်ကြောင်း ယေရှု သတိပေးခဲ့သည်။ သို့သော် အမျက်ဒေါသကို ဖွင့်ချပြီး ညီအစ်ကို,ကို မထီမဲ့မြင်ပြောဆိုသူသည် သာ၍အပြစ်ကြီးသဖြင့် ဒေသခံတရားရုံးထက် ပိုအဆင့်မြင့်သော တရားရုံးချုပ်တွင် အပြစ်စီရင်ခြင်းခံထိုက်သည်။
၅:၄၈—“ကေင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော [ကျွန်ုပ်တို့] အဘသည် စုံလင်တော်မူသည်နည်းတူ [ကျွန်ုပ်တို့] သည်လည်း စုံလင်” နိုင်မည်လော။ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စုံလင်နိုင်ပါသည်။ ဤတွင် ယေရှုသည် မေတ္တာအကြောင်း ဆွေးနွေးနေ၏။ ဘုရားသခင်အားတုပပြီး မေတ္တာပြရာတွင် စုံလင်ပြည့်ဝရန် ပရိသတ်များကို ကိုယ်တော်မိန့်ဆိုခဲ့သည်။ (မ. ၅:၄၃-၄၇) မည်သို့အားဖြင့်နည်း။ သူတို့၏ရန်သူများကိုပင် မေတ္တာပြခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။
၇:၁၆-၂၀—စစ်မှန်သောဘာသာကို အဘယ် “အသီး” များဖြင့် သိရှိနိုင်မည်နည်း။ ထိုအသီးများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အကျင့်ထက်မက ပါဝင်သည်။ ယင်းတို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်လျှောက်နေသော သွန်သင်ချက်များဖြစ်သည့် ယုံကြည်ချက်များလည်းပါဝင်သည်။
၁၀:၃၄-၃၈—မိသားစုအတွင်း စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းမှာ ကျမ်းစာသတင်းစကားကြောင့်လော။ မဟုတ်ပါ။ မယုံကြည်သူမိသားစုဝင်များကြောင့် စိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို လက်မခံခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ခြင်းကြောင့် မိသားစုအတွင်း စိတ်ဝမ်းကွဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။—လု. ၁၂:၅၁-၅၃။
၁၁:၂-၆—ယေရှုအား ဘုရားသခင်ချစ်မြတ်နိုးကြောင်းပြောဆိုသည့် အသံကို ယောဟန်ကြားချိန်တွင် ယေရှုသည် မေရှိယဖြစ်ကြောင်း သူသိရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ရာ “ကိုယ်တော် သည် ကြွလာသောသူ မှန်သလော” ဟုအဘယ်ကြောင့် မေးမြန်းခဲ့သနည်း။ ယေရှုကိုယ်တိုင်၏ အတည်ပြုပြောဆိုချက်ကို ယောဟန်သိရှိလို၍ မေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အာဏာနှင့်ကြွလာပြီး ဂျူးတို့၏မျှော်လင့်ချက်များကို ပြည့်စုံစေမည့် “အခြားသောသူ” ရှိသေးသလောဆိုသည်ကို ယောဟန် သိလိုခဲ့သည်။ ယေရှု၏အဖြေက နောက်ထပ်ကြွလာမည့်သူမရှိကြောင်း ဖော်ပြသည်။
၁၉:၂၈—စစ်ကြောစီရင်ခံရမည့် “ဣသရေလလူတစ်ဆယ့်နှစ်မျိုး” မှာ မည်သူတို့ကိုပုံဆောင်သနည်း။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ဣသရေလလူမျိုး ၁၂ နွယ်ကို ပုံဆောင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ (ဂလ. ၆:၁၆; ဗျာ. ၇:၄-၈) ယေရှုစကားပြောနေသည့် တမန်တော်များမှာ ဘုရားသခင်၏ဣသရေလလူမျိုးအဝင်ဖြစ်သောကြောင့် သူတို့သည် အချင်းချင်းကို ပြန်၍စစ်ကြောစီရင်မည် မဟုတ်ပေ။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင့် ‘နိုင်ငံတော်အတွက် သူတို့နှင့် ပဋိညာဉ်ဖွဲ့’ ခဲ့ပြီး သူတို့သည် ‘ဘုရားသခင်ရှေ့မှာ ရှင်ဘုရင်အရာ၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်အရာ’ ကိုရရှိကြမည်။ (လု. ၂၂:၂၈-၃၀; ဗျာ. ၅:၁၀) ဘုရားသခင်၏ဣသရေလလူမျိုးသည် ‘လောကနိုင်ငံကိုတရားစီရင်’ ကြမည်။ (၁ ကော. ၆:၂) ထို့ကြောင့် “ဣသရေလလူတစ်ဆယ့်နှစ်မျိုး” သည် အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင် တော်ဝင်ယဇ်ပုရောဟိတ်အမျိုးမဟုတ်သော ၁၂ နွယ်နှင့်တူသည့် လူသားထုကြီးကို ပုံဆောင်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ သူတို့ကို ကောင်းကင်ပလ္လင်များပေါ်တွင်ထိုင်သူတို့က တရားစီရင်မည်ဖြစ်သည်။—ဝတ်. အခန်းကြီး ၁၆။
၄:၁-၁၀။ ဤမှတ်တမ်းက စာတန်သည် အမှန်တကယ်တည်ရှိကြောင်း၊ မကောင်းသောစိတ်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်း သိရှိစေသည်။ သူသည် ‘ကိုယ်ကာယတပ်မက်ခြင်း၊ မျက်စိတပ်မက်ခြင်း၊ လောကစည်းစိမ်၌ဝါကြွားခြင်း’ တို့ကိုသုံးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို သွေးဆောင်သည်။ သို့သော် ကျမ်းစာမူများကို ကျင့်သုံးခြင်းက ဘုရားသခင်ကိုဆက်သစ္စာရှိနေရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။—၁ ယော. ၂:၁၆။
၅:၁–၇:၂၉၊ ကဘ။ ဘုရားသခင်ကို မှီခိုဖို့လိုကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါ။ သင့်မြတ်စွာနေတတ်သူဖြစ်ပါ။ အကျင့်ပျက်အတွေးအခေါ်များကို ရှောင်ပါ။ ကတိတည်ပါ။ ဆုတောင်းသောအခါ ရုပ်ပစ္စည်းထက် ဘုရားသခင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဆိုင်သောအရာများကို ဦးစားပေးဆုတောင်းပါ။ ဘုရားသခင့်ရှေ့တွင် ကြွယ်ဝနေပါ။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရှေးဦးထားပါ။ အခြားသူများကို မစီရင်ပါနှင့်။ ဘုရားသခင့်အလိုတော်ကို လုပ်ဆောင်ပါ။ တောင်ပေါ်တရားတော်တွင်ပါဝင်သော ထိုသင်ခန်းစာများသည် အလွန်လက်တွေ့ကျပေသည်။
၉:၃၇၊ ၃၈။ “လုပ်ဆောင်သောသူတို့ကို စပါးရိတ်ခြင်းငှာစေလွှတ်” ပါဟူသော ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်နှင့်အညီ တပည့်ဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ဇွဲရှိရှိပါဝင်သင့်သည်။—မ. ၂၈:၁၉၊ ၂၀။
၁၀:၃၂၊ ၃၃။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်း ပြောဆိုရာတွင် လုံးဝမကြောက်ရွံ့သင့်ပေ။
၁၃:၅၁၊ ၅၂။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အမှန်တရားများ၏ဆိုလိုရင်းကို နားလည်လာသောအခါ ယင်းတို့ကို အခြားသူများအား သွန်သင်ပေးရန်နှင့် ဝေမျှပေးရန် တာဝန်ရှိသည်။
၁၄:၁၂၊ ၁၃၊ ၂၃။ တစ်ဦးတည်းရှိနေချိန်များတွင် ကောင်းစွာတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်သည်။—မာ. ၆:၄၆; လု. ၆:၁၂။
၁၇:၂၀။ ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးကို ပျက်ပြားစေသည့် တောင်ကဲ့သို့သော အတားအဆီးများကို အောင်မြင်နိုင်ရန်၊ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယေဟောဝါနှင့်ကိုယ်တော့်ကတိတော်များအပေါ် ယုံကြည်ခြင်းကို တည်ဆောက်ပြီး ခိုင်ခံ့မြဲမြံနေစေသင့်သည်။—မာ. ၁၁:၂၃; လု. ၁၇:၆။
၁၈:၁-၄; ၂၀:၂၀-၂၈။ လူ့မစုံလင်မှု၊ ရာထူးအဆင့်အတန်းကို အလေးပေးသော ဘာသာရေးနောက်ခံကြောင့် ယေရှု၏တပည့်များသည် ကြီးမြတ်မှုအပေါ် အလွန်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ပြုလိုသောအလိုဆန္ဒများကို တွန်းလှန်ပြီး လုပ်ငန်းတော်အခွင့်ထူးနှင့်တာဝန်များအပေါ် တော်မှန်သည့်အမြင်ရှိသည့်အလျောက် နှိမ့်ချမှုကို မွေးမြူသင့်သည်။
ယေရှုသည် အေဒီ ၃၃၊ နိသန်လ ၉ ရက်တွင် ‘မြည်းကိုစီး၍’ ယေရုရှလင်မြို့သို့ ကြွတော်မူ၏။ (မ. ၂၁:၄၊ ၅) နောက်တစ်နေ့တွင် ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်သို့သွားပြီး ထိုတွင်ရှိသောအရာများကို ရှင်းလင်းတော်မူသည်။ နိသန်လ ၁၁ ရက်တွင် ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်၌ သွန်သင်ပြီး ကျမ်းတတ်များ၊ ဖာရိရှဲများကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချ၏။ ထို့နောက် “ကိုယ်တော်ရောက်ရှိနေခြင်းနှင့် ဤလောကစနစ်ကုန်ဆုံးခြင်း၏နိမိတ်” များကို တပည့်များအား ဖော်ပြသည်။ (မ. ၂၄:၃၊ ကဘ) နောက်တစ်နေ့တွင် ကိုယ်တော်က “နှစ်ရက်လွန်မှ ပသခါပွဲနေ့ရောက်မည်ကို သင်တို့သိကြ၏။ ထိုအခါ လူသားကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်သတ်စေခြင်းငှာ အပ်နှံကြလိမ့်မည်” ဟုမိန့်တော်မူ၏။—မ. ၂၆:၁၊ ၂။
နိသန်လ ၁၄ ရက်ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ကျရောက်တော့မည့် မိမိ၏သေခြင်းကို အောက်မေ့ရာပွဲကျင်းပပြီးနောက် သစ္စာဖောက်ခံရ၊ ဖမ်းဆီးခံရ၊ စစ်ဆေးမေးမြန်းခံရပြီး သစ်တိုင်ပေါ်တွင် အသတ် ခံခဲ့ရသည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ကိုယ်တော် ထမြောက်တော်မူ၏။ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးသောယေရှုသည် ကောင်းကင်သို့မတက်ကြွမီ နောက်လိုက်များအား “သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေ . . . ကြလော့” ဟုမိန့်မှာ၏။—မ. ၂၈:၁၉။
၂၂:၃၊ ၄၊ ၉—မင်္ဂလာပွဲသို့ သုံးကြိမ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းသည် အဘယ်အချိန်များတွင် ဖြစ်ခဲ့သနည်း။ သတို့သမီးအတန်းအစားဖြစ်သော ဝိညာဉ်တော်ဖွားများကို ပထမအကြိမ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းသည် ယေရှုနှင့်နောက်လိုက်များ စတင်ဟောပြောသော အေဒီ ၂၉ မှ အေဒီ ၃၃ အထိဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းသည် အေဒီ ၃၃၊ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သွန်းလောင်းချိန်မှ အေဒီ ၃၆ အထိဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်ကြိမ်စလုံးသည် ဂျူး၊ ဂျူးဘာသာဝင်များနှင့် ရှမာရိလူမျိုးများကိုသာ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် တတိယအကြိမ်တွင် မြို့ပြင်လမ်းများမှလူများ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အရေဖျားမလှီးသော တစ်ပါးအမျိုးသားများကို ဖိတ်ခေါ်သည်။ ယင်းသည် အေဒီ ၃၆ တွင် ရောမတပ်မှူးကော်နေလိ ဘာသာပြောင်းဝင်ချိန်မှစတင်ပြီး ယနေ့အချိန်တိုင်ဖြစ်သည်။
၂၃:၁၅၊ ကဘ—ဖာရိရှဲများ ဘာသာသွင်းသူသည် ဖာရိရှဲများထက် “နှစ်ဆသောဂေဟင်နာသား” အဘယ်ကြောင့် ဖြစ်ရသနည်း။ ဖာရိရှဲများ ဘာသာသွင်းသူအချို့သည် ယခင်က ကြီးလေးသောအပြစ်ပြုသူများဖြစ်ပေမည်။ ဖာရိရှဲများ၏အစွန်းရောက်ယုံကြည်ချက်များကို သွတ်သွင်းခံရသဖြင့် သူတို့သည် ယခင်ကထက် ပိုဆိုးလာကြပြီး သူတို့၏ဆရာများထက် ပို၍အစွန်းရောက်သူများ ဖြစ်လာဖွယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဖာရိရှဲများနှင့်ယှဉ်လျှင် သူတို့သည် “နှစ်ဆသောဂေဟင်နာသား” ဖြစ်ကြ၏။
၂၇:၃-၅—ယုဒသည် အဘယ်အရာအတွက် နောင်တရခဲ့သနည်း။ ယုဒသည် စစ်မှန်သောနောင်တရခဲ့သည်ဟု မဖော်ပြထားပါ။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ခွင့်လွှတ်မှုကို ရှာယူမည့်အစား ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးများနှင့် အသက်ကြီးသူများထံတွင် သူ့အမှားကို ဝန်ခံခဲ့သည်။ ‘သေပြစ်သင့်သောမကောင်းမှု’ ကို ကျူးလွန်ခဲ့သောကြောင့် အပြစ်ရှိသည်ဟု သူခံစားခဲ့ရမည်မှာ သေချာသည်။ (၁ ယော. ၅:၁၆) သူ၏မျှော်လင့်ချက်မဲ့သောအခြေအနေအတွက် နောင်တရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၂၁:၂၈-၃၁။ ယေဟောဝါအတွက် အရေးကြီးသောအရာမှာ ကိုယ်တော့်အလိုတော်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သတင်းဟောပြောခြင်းနှင့် တပည့်ဖြစ်စေခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ဇွဲရှိရှိပါဝင်သင့်သည်။—မ. ၂၄:၁၄; ၂၈:၁၉၊ ၂၀။
၂၂:၃၇-၃၉။ ဘုရားသခင်သည် မိမိအားဝတ်ပြုသူများထံမှ အဘယ်အရာတောင်းဆိုကြောင်း အကြီးမြတ်ဆုံးပညတ်နှစ်ခုက အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြ၏။
ရိတ်သိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင် သင် ဇွဲရှိရှိပါဝင်နေသလော
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကို မဿဲ အလေးပေးဖော်ပြခဲ့
‘သခင်ထံမှ ခံယူထားသော အမှုတော်ကို သတိပြုလျက်နေပါ’
သင်၏ “သွန်သင်ခြင်းနည်းပညာ” ကို သတိပြုလော့
“တလိုတလားရှိသူ” တို့ တုံ့ပြန်နေကြ
သူတို့၏အသက်တာသည် ကြွယ်ဝပြည့်စုံခဲ့ သင်လည်း ထပ်တူပြုနိုင်မည်လော
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကို ဝင်စားထိုက်သည်ဟု ယူမှတ်ခံရ
အသက်စမ်းရေတွင်းသို့ လမ်းပြခံထိုက်သူများအဖြစ် ယူမှတ်ခံရ
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၈
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၈